Ipayipi Lombhobho Wokugeza Elimnyama Elimnyama Elodwa | OOWOW Isikebhe Sink ompompi
Ikhaya / Amanzi okugeza / Amafulethi Wokugezela Elingashintshiwe Owodwa / I-WOWOW Isikebhe Sompompi Bompompi Matte Black
I-Matte Black Bathroom Faucet ikunikeza ukuklama nekhwalithi kokukodwa. Ukusebenza okumangazayo futhi
isitayela esihle kakhulu. Thenga isikebhe sethu esikhulu sokugeza matte manje!
2321501B imiyalo yokufaka
Isikebhe esimnyama sendlu yokugezela 2321501B
Ukuqamba indlu yakho yokugezela kuwumsebenzi onomvuzo. Yize uvame ukuchitha isikhathi esiningi endlini yakho yokugezela, ungasebenzisa le ndawo ukuphumula isikhathi eside, isibonelo ku-whirlpool yakho. Noma iyiphi indlela, akufanele ululaze kancane igalelo lokuklanywa kwendlu yakho yokugezela. Kufanele kube yingxenye yoyilo oluphelele lwendlu yakho futhi kufanele isikhathi sakho sokuyicabanga kahle ngokwesakhiwo nokusebenza kwayo.
Igumbi lokugezela kufanele likunikeze isethi elinganiselayo yomklamo nokusebenza kwayo. Ukusebenza kubaluleke kakhulu, njengoba izikhathi eziningi ufuna nje ukusebenzisa imisebenzi eyisisekelo yokugezela kwakho. Ukwenza isibonelo, ukugeza nokuxubha amazinyo akho lapho ushesha kakhulu ekuseni. Ngakolunye uhlangothi, ikakhulukazi uma usesimweni sokuphumula kwengqondo, ungakwazi ukujabulela ngempela ukwakhiwa kwakho kokugeza, uphumule kubhavu lakho lokugeza ngokwesibonelo. Into enhle yomklamo wokugeza ukuthi, ungafaka konke ukwakheka kukho. Kunezigidi zezinketho lapho udizayina igumbi lokugezela, futhi noma ngabe yini oyinqumayo, uzoba nokuhlobisa okuhlukile okungekho omunye umuntu onakho. Futhi uwena kuphela umqambi wayo. Ungazithola uphefumulelwa omagazini namawebhusayithi, kepha ekugcineni unguyena onquma ukuthi igumbi lakho lokugezela lizobukeka kanjani.
Isikebhe esisodwa sokugeza sangasese emnyama
Lapho uklama igumbi lakho lokugezela elihle, akufanele ululaze kancane ithonya lemishini yokugezela. Njengoba izitsha zangasese ezisezindlini zokugezela zingamaphuzu wemvelo agxile kunoma iyiphi yokugezela, abantu bahlala bebheka izitshana zakho ekuqaleni. Ngakho-ke kufanele ngaso sonke isikhathi ukhethe iziphephe zakho zangasese ngokunakekelwa. Ngaphandle kokusebenza, ufuna igumbi lakho lokugezela lihehe futhi lifake isitayela oziqhenyayo ngalo. Lokho kusho ukuthi akufanele ushiye ukukhethwa kohlobo lwamaphenti okugeza kuze kube sekupheleni lapho usuvele usuyakha igumbi lakho lokugezela. Kufanele wenze amakhishi asekhishini asevele eyingxenye ebalulekile yomklamo wakho wokugezela.
Ngokuphathelene nesinki yakho yokugezela, ungokhetha ezinhlotsheni eziningana zamaphenathi echibi lokugezela. Ungakhetha imishini yokugezela ebamba kabili noma imishini yokugezela eyedwa. Imisipha yokugezela eyedwa yokubamba yaziwa nangokuthi imbobo yokugezela eyodwa yangasese. Inzuzo eyinhloko yemishini yokugezela isibambo esisodwa ukuthi uyakwazi ukulawula izinga lokushisa kwamanzi ngesandla esisodwa. Enye inzuzo iphathelene nokuqina kokufaka. Njengoba udinga imbobo eyodwa nje, kulula kakhulu ukufaka isikebhe sokugeza esisodwa. Imbobo yokugezela eyodwa yangasese iza nazo zonke izinhlobo zezitayela nemiklamo. Isikebhe esimnyama sokugezela se-matte se-WOWOW sikunikeza umklamo omuhle kakhulu ofana ncamashi ne-gooseneck ngombala ogqamile futhi oyingqayizivele.
Isitampu sepayipi esimnyama nesisebenzayo
Isikebhe esimnandi futhi esisebenzayo se-matte black bath faucet yeWOWOW ilula futhi ayinasikhathi. Yonke intshi yalesi siqeshana esihle semishini yokugezela yayenziwe ngokucophelela ukuze imelane nanoma yikuphi ukugqwala noma ukuklwebheka. Ngakho-ke kuhlale kunokwenzeka ukugeza nokugcina le matte emnyama yokugezela isikulufu faucet ukuyigcina ifanelekile. Umbala omnyama ohlukile uveza isikulufu sendlu yokugezela ngokubukeka kwesimanje okuzoba yingxenye yesitayela esiyingxenye yanoma iyiphi igumbi lokugezela lokwakha. Ngaphandle kwalokho ungathola imicengezi efana neyokugezela yokugezela yesishawa sakho nesibhavu sokugeza, isibonelo, ukwenza ingxenye eyodwa yobunye nayo yonke indlu yakho yokugezela.
Isikhuhlu esikhulu se-arc matte black yokugezela sibonisa isici esisebenzayo se-gooseneck silhouette ka-5.8 inch. Isikhala sokugezela sokugezela sinikeza ukufinyelela okwanele kokugeza kahle. Ukugeleza kwamanzi kushelele futhi kuzinze. Ngaphandle kwalokhu, le spout esezingeni eliphezulu iyi-anti-splatter, ngakho-ke ngeke umanzise izingubo zakho ngenkathi uzigeza echibini lokugezela. Ekugcineni awudingi ukwelula izintende zezandla zakho ukufinyelela amanzi, njengoba idizayini entsha ye-gooseneck ikunikeza amanzi lapho uwadinga khona. Ukuqedela ukwakhiwa kwakho, uzothola isithasiselo se-pop-up esifakiwe ukwenza inhlanganisela eyodwa evumayo echibini lakho lokugezela.
Isikebhe esimnyama sendlu yokugezela esezingeni elifanele
I-WOWOW isebenzisa izinto ezisezingeni elifanele kakhulu imishini yokugezela yayo. Izikhungo zayo zokukhiqiza ezisezingeni eliphakeme ziqinisekisa izindlela eziqondile nokulinganiswa kwazo zonke izinto zalo. Isikebhe sokugeza se-WOWOW ngakho-ke iyunithi elilodwa lokuhlangana elenzelwe ukusebenza okuphezulu. Akusizi ngalutho ukuthi lo mkhiqizo uhambisana ne-American Conventional Stainless iron Ukufakwa. Idiski ye-ceramic-free ceramic yediski yokugezela emnyama ye-WOWOW ivalwe ngokuqinile. Ukuhlaziya kukhombisa ukuthi idiski engenantambo yedrip ayisalokhu ikhombisa ukukhululeka ngemuva kwemijikelezo engama-500,000.
Isibambo se-lever sesitofu sokugezela esimnyama se-WOWOW sishintsha kakhulu. Ungalawula kalula izinga lokushisa kwamanzi kepha nokho linikeza ukubamba okwanele ukulawula amazinga okushisa angashisi. Ngaphezu kwalokho, isikebhe esimnyama sendlu yokugezela sinokuqina okuqinile njengoba kwakhiwa umzimba we-faucet kusuka kubhedu oluqinile uhlangana nezinto ezisezingeni eliphakeme. Lapho ubamba le faucet yokugezela emnyama ye-matte ye-WOWOW ezandleni zakho, ngokushesha uqaphela ikhwalithi ayinikezayo.
Iphethini yokugezela emnyama enamanani entengo efanelekile
Usebenzisa izinto ezisezingeni eliphakeme, i-WOWOW isakwazi ukukunikeza lesi isikebhe esimnyama ekhishini ngentengo efinyelelekayo. Wowow okokuqala uyazi ukuthi ungazithenga kuphi izinto zokusetshenziswa ngamanani entengo. Okwesibili, izikhungo zokukhiqiza ezisezingeni eliphakeme zanamuhla zeWWOW ziqinisekisa inqubo yokukhiqiza esezingeni eliphansi. Ngale ndlela uzuzwa ngalezi zinzuzo futhi uqinisekiswa ngesesekeli eliphakeme lesitayela se-matte black yokugezela ngenani eliphakeme kakhulu lentengo ozolithola. Lapho uthenga isikebhe esimnyama sokugezela se-matow emnyama, uzothola konke okudingayo ukufaka lesi isikebhe esimnyama sendlu yokugeza. Ngaphandle kwesithinteli sokudonsa kwe-pop-up, i-escutcheon yokuncoma yokufakwa kwegodi eli-1 noma le-3 nayo ifakiwe. Uzothola ukuxhumana okudingakalayo kwamanzi ukwenza ukufakwa kalula kwenzeke. Yonke imishini yokugezela ye-WOWOW ekugcineni iza nenkathi ephelele yeminyaka engu-5, isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-90 nokuthumela kwamahhala kwamazwe aphesheya!
Izinzuzo zesiteketisi sokugezela esimnyama esimnyama ngamafuphi:
 Umbala omnyama we-matte
 Idizayini yesimanje ye-gooseneck
 Kulula ukuhlanganisa neminye imishini yokufihla ye-matte emnyama
 Iwaranti yeminyaka emi-5
I-SKU: 2321501B Categories: Amafulethi Wokugezela Elingashintshiwe Owodwa, Amanzi okugeza Tags: ipuleti lendwangu, isikulufu esiphundu, isitsha sokucwila
23.5 x 11.7 x amasentimitha angu-3
Imodi Yesibili: Imodi Yokufafaza / Imodi Yokusakaza